Sevhisi - Yixing Boya Nyowani Zvinyorwa Technology Co., Ltd.
Pre yekutengesa sevhisi
Nemakore anopfuura makumi maviri ane ruzivo R & D boka kukupa hunyanzvi kurongedza mhinduro!
Boya inopa huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa zvemarudzi ese ekupakata zvinosanganisira kushandiswa kwechikafu, kushandiswa kwemaindasitiri, kunhuhwirira bhegi
Tine nyanzvi yekutengesa dhipatimendi uye sisitimu sumo yezvose zvigadzirwa nechikumbiro chavo kuti iwe uzive zvese zvechigadzirwa iwe chauri kutsvaga, Pausingazive kuti ndechipi kurongedza chakanyanya kukodzera chako ndapota ingotiudza kuti chii chigadzirwa chauri kurongedza ipapo redu rehunyanzvi R & D boka rinokurudzira zvimwe zvigadzirwa zvine hukama, zvese kutaurwa, kunyorera uye nehunyanzvi dhata dhata zvinotaurira kuti ndeipi mhinduro yakanakira iwe. Yemahara sampuro zvakare inogona kupihwa iwe kuti uone uye kuyedza kana ichikwana zvakakwana pane chako chigadzirwa.
KuDhipatimendi reBoya QC unogona kuwana pazasi pekuyedza michina:
Nikon Industrial maikorosikopu
● edza rukoko uye chimiro chemuenzaniso
● chaiyo imwechete dhizaini hukobvu
● Kuongorora mashandiro efirimu uye gadziridza kugadzirwa
● Microcomputer otomatiki oparesheni ine yakanyanya kurongeka
● Bvunzo yekutumira uye huni
Coefficients yeFriction Tester
● Kwayedza static uye kinetic coefficients yekukweshera kwemafirimu nemabhegi
● Kuvandudza kumhanya kwepachikafu
Kupisa Seal Tester
● Edzai tembiricha yechisimbiso uye kumanikidza kwechisimbiso
● Pakutonhodza kwakatemwa uye kumanikidzwa kuti uone iyo firimu kuti inogona kuvezwa here kupisa
● kirasi-imwe kuyedza kunyatso
● 7 mhando dzekuzvimiririra maitiro kusanganisira kutambanudza, kubvisa, chisimbiso chekupisa nezvimwe.
● yakawanda-simba kukosha kukosha
● 7 kumhanya kwekuyedza
Nedu epamberi bvunzo yekushandisa uye makumi maviri emakore ane maneja ane ruzivo, tinoda kukupa iwe rwese rutsigiro rwatinogona. Unogona kushamisika kuti QC yedu inobatana sei newe, ndapota ona pazasi:
● Paunenge uine chinhu chitsva usingazive ruzivo ndapota titumire iyo sampuli yatinogona kukubatsira iwe kuyedza
● Yemahara bvunzo bvunzo kuti iwe uzive zvimwe zvezvinhu zvaunazvo.
● Vhidhiyo maitiro ese ebvunzo, Iwe unozoziva zvakajeka zvatiri kuita.
● Yemahara sampuro yekuti iwe uedze mhando
Chero nguva iyo iwe yaunoda kupinda munzvimbo nyowani nezvimwe zvepamberi zvinhu, usazeze kutibvunza isu, tinoda kuyedza zvinhu zvitsva, hunyanzvi ndechimwe chikonzero nei isu takavamba Boya, ngatishandei pamwe pazvinhu zvitsva! Boya zvakare yako kugadzira muChina nemutengo wakaderera!
Kuisa seimwe yeakanyanya kukosha chinhu mukati menguva refu yekutumirwa kwegungwa tinofanira kuona kuti yakasimba zvakakwana .Zvisinei kuti zvinotora nguva yakareba sei kugungwa tinovimbisa kana iwe ukawana zvinhu zvedu zvakagadzirira kuendesa kumutengi wako zvakananga. Zvese zvekuturika uye zvinyorwa zvakagadziridzwawo, kana iwe uchida kuve neakasiyana mapakeji ndeezvako chete ndapota sununguka kutitaurira, mugadziri wedu achashanda newe!
Boya anokupa iwe yakawanda yenguva yekutumira yekusarudza, FOB, CIF, CFR, ndiyo izwi rakajairika isu tinoshandisa, zvisinei iwe uri mutengi mutsva kana ruzivo isu tichakubatsira iwe kubata zvese zvakadzama.
Kutengesa idanho rekutanga asi kwete rekupedzisira. KuBoya tinovaka hukama hwenguva refu nevatengi vedu nekupa yakanaka mushure-yekutengesa sevhisi.
MuBoya kubva panguva yatinowana dhipoziti yako, isu tinokuzivisa iwe nekukurumidza uye tinokuudza zvatichaita zvinotevera odha yako, yedu yekugadzira purogiramu, yako odha yekugadzira static nekutora vhidhiyo rezvako zvigadzirwa kuti iwe uzive zvakajeka zveako maitiro sekutanga muchina, gadzirisa, kuyedza, kurongedza, kugadzirira kuburitsa.
Pamberi pekutakura zvinhu isu tichaongorora zvakare kuwanda, saizi uye chitaridzi, kana iwe uchida kuyedza zvinhu neyako tinogona kugadzira vhidhiyo pamwe chete, isu tinoteedzera yako odha yebhokisi ripi chinhu chaunoda kutarisa kusvikira wagutsikana Mushure mekunge zvinhu zvasiya tichazokutorerawo mamwe mafoto ekutanga.
Kana zvinhu zvacho zvasvika pachiteshi chekuenda, kana iwe uine chero mibvunzo pane clearance ndapota inzwawo wakasununguka kutitaurira, 7 * 24 maawa epamhepo sevhisi kana email tinokupindura iwe pakutanga kwedu.
Mushure mekugashira zvinhu ndapota tarisa kutaridzika kwenguva yekutanga, chero kukuvara mhinduro kwatiri nemimwe mifananidzo panguva yako yekutanga isu tichatora edu ane basa uye towana mhinduro yekuvandudza, ngatishandei pamwe! Ndimi munotiita nani.
Kune iyo mibvunzo yechigadzirwa usuage, tinogona kutungamira neemail, gwaro, online meseji, vhidhiyo .Kana iri rimwe dambudziko rakaoma rehunyanzvi tinogona zvakare kutumira tekinoroji yako kunzvimbo yako kuti utarise uye tinotaurirana.
Boya anogara ari parutivi rwako!